သတင်း မှတ်တမ်းယူသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတဦး ပြည်နှင်ခံရ | ဧရာဝတီ
သတင်း မှတ်တမ်းယူသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတဦး ပြည်နှင်ခံရ
သာလွန်ဇောင်းထက်| January 30, 2013 | Hits:7,595
9 | | ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လိုင်ဇာ ရောက်သည်အထိ လမ်းလျှောက်သူများ ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာလာစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့နယ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်နေသူများနှင့် လိုက်ပါ၍ သတင်းမှတ်တမ်း ရယူသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတဦးကို ယနေ့ညနေ ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တောင်ငူမြို့နယ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများအကြောင်း လိုက်လံ မှတ်တမ်းယူနေသော ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Mr. Christofa ဆိုသူကို ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များက သူတည်းခိုနေရာ တောင်ငူမြို့ အမေ့အိမ် တည်းခိုခန်းမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တဆင့် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူတဦး ဖြစ်သည့် မမြနန္ဒာက ပြောသည်။
“ပြင်သစ်နိုင်ငံသားက မနေ့ကတည်းက ကျွဲပွဲကနေ တောင်ငူအထိ တနေကုန် သတင်းမှတ်တမ်း လိုက်ယူတယ်။ ကျမတို့ကိုလည်း သူက အင်တာဗျူးတွေဘာတွေ လုပ်တယ်။ သူက ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ အထိ ဗီဇာ ရထားပြီးသားလို့ ပြောတယ်။ ဗီဇာကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဗီဇာအမျိုးအစား၊ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှာ သူတည်းနေတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ တောင်ငူမြို့နယ် လ၀ကမှူး ဦးစန်းဝင်းနဲ့ အာဏာပိုင်တွေက သူ့ရဲ့ အထုပ်အပိုးတွေကို ကားပေါ်တင်ပြီး ရန်ကုန်ကို ပို့မယ်၊ လေဆိပ်ကနေ ဒီညနေ ပြည်နှင်မယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု မမြနန္ဒာက ဆိုသည်။
တောင်ငူမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးကလည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Mr. Christofa ကို ဦးစီးအရာရှိ ဦးစန်းဝင်းကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပြီ ဖြစ်ပြီး တိုင်းဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
Mr. Christofa ကို ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးရာတွင် အထက်အာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသည်၊ မည်သူက ညွှန်ကြားသည် ဆိုသော အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်မပြောနိုင်ဟု သိရှိရကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများက ဆိုသည်။
“လ၀က ဦးစီးအရာရှိ ဦးစန်းဝင်း ပြောတာကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတယ်ပေါ့။ ဘာကြောင့် ဘယ်သူက ညွှန်ကြားလို့ ပေးတာလဲ ဆိုတာကို မပြောဘူး။ Christofa က ကျမတို့ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြောတာက သူရဲ့ အထုပ်အပိုးတွေကို အတင်း ကားပေါ်ဆွဲတင်ပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆက်ဆံတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်” ဟု မမြနန္ဒာက ရှင်းပြသည်။
Mr. Christofa က ယနေ့ညနေ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံလိုသဖြင့် သတင်းထောက်များကို အကြောင်းကြား ပေးထားရန် အကူအညီ တောင်းခံထားကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများထံမှ သိရှိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ တွင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး လိုင်ဇာမြို့သို့ ရောက်သည်အထိ လမ်းလျှောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တနေ့လျှင် မိုင်၂၀ အထိ ရောက်အောင် လျှောက်မည်ဖြစ်ကာ လက်ရှိ အဖွဲ့အတွင်းတွင် သံဃာတော် ၅ ပါးနှင့် လမ်းလျှောက်သူ ၃၀ ဦးပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ သတင်းယူသည့် မီဒီယာသမားများ ခြိမ်းခြောက်ခံရ
ပြစ်ဒဏ်များ လျှော့သော်လည်း အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ တင်းကြပ်ဆဲ
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဥပဒေမူကြမ်း လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရေး ရက်ရွှေ့ဆိုင်း
သံတော်ဆင့် အယ်ဒီတာများကို ထပ်မံခေါ်ယူ စစ်ဆေးမည်
8 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ရာဇာ January 30, 2013 - 3:33 pm	ဒီမိုကရေစီ သို့ပြောင်းလဲနေသော တိုင်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီ ဆန္ဒနှင့် အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်နေသူများကို ဒီမိုကရေစီ နည်းဖြင့် သတင်းယူနေသော နိုင်ငံခြားသားကို ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများက ကားပေါ်ဆွဲတင်၍ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်သည်…..ဒါလားဟဲ့….ပြောင်းလဲနေတာ…ဒါမှမဟုတ်..ပြောင်နေတာများလား….
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 31, 2013 - 3:40 am	အသိဥာဏ်နုံ့နည်း မိုက်မဲတဲ့ အထက်လူကြီးတွေပဲ။ သည်ပြင်သစ်လူမျိုးကို သတင်းမယူစေချင်လို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတာနဲ့ ပြီးရောတဲ့လား။ အခုခေတ်ကြီးမှာ အင်တာနက်၊ ဖုန်းလိုင်းတွေနဲ့ သည်ပြင်သစ်က သတင်းတွေ ရနေမှာပဲ။ သူ့ကို သည်လို ဆက်ဆန်လိုက်တာကို ကမ္ဘာသိဖြစ်ပြီး အထက်အရာရှိအာဏာပိုင်တွေ ပိုနာမည်ပျက်မှာကျ မတွေးတတ်ကြဘူးလား။
Reply	မြန်မာပြည်သား January 30, 2013 - 4:50 pm	ကျွန်တော် တို့ တိုင်းပြည် က ပြည်သူတွေ အလိုကျ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို သွားနေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။
စစ်တပ် အလိုကျ ဖက်ဆစ် တိုင်းပြည် ဖြစ်အောင် ချီတက်နေတာ……
ဗမာ့ တပ် မတော် ပြည်သူ ကို လျှောက်စေတဲ့ လမ်းက ဗမာလူမျိုးများ စည်းလုံးစွာဖြင့် လူမျိုးငယ်များ အား သစ္စာ ဖောက်ကြမည် ဆိုသော လမ်းပါ။
အန်တီစု သမ္မတ ဖြစ်တောင် ဒီ တစ်မတ် သား တွေရှိနေသ၍ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ တိုက်ပွဲဝင်ဆဲ လို့ ပဲ မှတ်ယူရမှာ ပါ။
Reply	ကချင်ပြည်နယ်သား January 30, 2013 - 9:13 pm	အစိုးက ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထုကို ဒုက္ခပေးရင် တစ်ခုမှ ကောင်းပါဘူး။ သတင်းမီဒီယာဌာနတွေအနေနဲ့ သတင်းအမှန်တွေကို ပြည်သူလူထုသိအောင် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီမှုမပါပဲ သတင်းအမှန်တွေ တင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ…။
Reply	Linyone January 31, 2013 - 12:28 pm	As long as you soldiers do not welcome reporters, how can the media put your story on the news. You soldiers from Northern Command are famous for being so inhumane to the people.
Reply	Lightning January 31, 2013 - 3:37 am	This action will bring more damage to Thein Sein’s reform. No matter what kind of visa he has, he has the right to take news. Where is freedom of press and expression? This freedom is for everyone as long as I misuse my freedom to hurt someone’s freedom. The junta is self inflicting.
Reply	Linyone January 31, 2013 - 10:49 am	Thein Sein’s democracy is different from the democracy people have been dreaming for halfacentury. The people ask for life but Thein Sein gives them bullets. The people ask for food but Thein Sein gives themapackage which contains bomb. This is called Thein Sein’s democrazy. It is no way near to real democracy.
Reply	R.zar January 31, 2013 - 2:29 pm	ထိပ်ပြောင်ကြီး စတိုင်ထုတ်နေသည်။ အယောင်ဆောင်နေသည်။